Aqaba Fort Near The Flag Of The Arab Revolt In Aqaba, Jordan... Stock Photo, Picture And Royalty Free Image. Footage 95948428
Footage - Aqaba fort near the flag of the Arab Revolt in Aqaba, Jordan. Aqaba Castle, Mamluk Castle or Aqaba Fort, adjacent to the fort is an archaeological museum. Aqaba - only coastal city in Hashemite Kingdom of Jordan
Aqaba fort near the flag of the Arab Revolt in Aqaba, Jordan. Aqaba Castle, Mamluk Castle or Aqaba Fort, adjacent to the fort is an archaeological museum. Aqaba - only coastal city in Hashemite Kingdom of Jordan
Footage ID : 95948428